E Day: Mamantatra NyTeny Ankafizin’ireo Olo-malaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2011 4:28 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, polski, Nederlands, 日本語, Français, русский, Português, Català, македонски, English
Inona no zavatra itovian'ilay mpihira Shakira, ny mpilalao sarimihetsika Gael Garcia Bernal, i Sefo Ferran Adria ary ilay mpanoratra Mario Vargas Llosa? Izy ireo dia samy mpikambana ao amin'ilay vondron'ireo olo-malaza 30 nizara tamin'ny alalan'ny lahatsary ireo teny tena tian'izy ireo amin'ny teny Espaniola mba ho isan'ny fankalazana ny ‘E Day’ nokarakarain'ny Fianarana Ambony Cervantes.
Ny Fianarana ambony Espaniola Cervantes no nametraka ny hankalazana ny teny Espaniola aminà andianà hetsika ara-kolotsaina sy ara-panabeazana atao eran'izao tontolo izao ao amin'ireo toeram-pianaran'izy ireo amin'izay faran'ny herinandro akaiky indrindra ny “solstice d'été”; amin'ity taona ity, mianjera ho amin'ny 18 Jona 2011 izany daty izany.
Vonona ny hankalaza ny E Day
Tamin'ny alalan'ny tranonkalan'izy ireo, vitan'izy ireo ny nanintona ny sain'ireo mpiteny Espaniola maneran-tany, izay nisafidy ireo teniny tamin'ny horonantsary ary nilalao teny mifampiditra niaraka tamin'ny mpitsidika hafa an'ireo vohikala ka raha tsara vintana dia hahazo fitsangatsanganan'olon-droa any Andalucia any Espana.
Nanjary lasa isan'ireo lahatsary tena nanintona hanaovana dokam-barotra ho an'ilay fotoan-dehibe ny lahatsarin'ireo olo-malaza miteny ireo teny tena ankafizin'izy ireo, ary na dia tany amin'ny firenena izay tsy ahitàna ny fankalazana ataon'ny fianarana ambony Cervantes aza, dia nalefa tamin'ny fahitalavitra ihany koa ireo lahatsary ireo:
Amin'ity andiany fahatelo ity, dia manantena ny fanohanan'ireo olo-malaza telopolo avy amin'ny seha-pahalalàna samihafa mifangaro izahay, izay samy nizara niaraka taminay ny lanjan'ny fahaizana miteny Espaniola. ho azy ireo. Izay no mahatonga anay handrisika ireo mpiteny Espaniola handray anjara amin'ity andiany ity ka hisafidy teny iray izay noraisin'ireo olo-malaza ho teny tena ankafiziny.
Nalaina tamin'ny fiteny Espaniola avokoa ireo lahatsary ato: raha te hamaky ireo horonana amin'ny fiteny hafa ianao, dia tsindrio eo amin'ny horonana nadika eo amin'ilay lahatsary ao amin'ny YouTube.
Nanjary nalaza erantany noho ny hirany sy ny dihiny i Shakira, mpanakanto Kolombiana ; ny akaiky indrindra dia tamin'ny fiadiana ny amboara erantany amin'ny baolina kitra izay nahitàna ny hira Waka Waka nanjary niaraka tamin'ny Vovozela teny an-kianja sy tany an-trano eran'izao tontolo izao. Ato amin'ity lahatsary ity , no hazavainy hoe fa maninona no ny hoe “mellifluous” no teny Espaniola tena ankafiziny indrindra.
Mety mbola ho tadidin'ny olona ny mpilalao sarimihetsika Meksikana Gael Garcia Bernal nilLo ny el Che tao amin'ny Motorcycle Diaries, na i Stéphane ilay olona miavaka be ao amin'ny horonan-tsarimihetsik'i Michel Gondry “The Science of Sleep”: eto amin'ny resany , ny teny tena ankafiziny “Querétaro” no nahazo ny fanohanan'ireo mpampiasa izay nahasintona mpifidy anjatony hitodika tany aminy.
Noraisina ho mpahandro mahay indrindra erantany ilay sefo Espaniola Ferran Adria ary ny trano fisakafoanany El Bulli no mitàna ny loha-laharana miaraka amin'ny fomba fandraisana hafakely mihavao hatrany eo amin'ny sakafo sy ny fahandroana azy, amin'ny alalan'ny famakivakiana ny singa sy ny famadibadihana ny endriny nefa nitazonana hatrany ny tsirony. Toa mampiseho izay fombany hafakely momba ny sakafo sy ny fahandroana izay ny teny nosafidiany: Fanahy.
Nahazo ny loka Nobel teo amin'ny haisoratra tamin'ny taona 2010 ny mpanoratra Peroviana Mario Vargas Llosa , taorian'ny am-polon-taona maro efa nanomezana loka azy foana. Mifandray amin'ny asany ara-politika sy ny fironan-keviny, ny ” fahalalahana” no teny nosafidiany ho an'ny Fianarana Ambony Cervantes.
Olo-malaza hafa toy ilay mpilalao sarimihetsika Antonio Banderas, ilay mpihira Alejandro Sanz, ilay mpihira Chayanne, ilay mpanoratra Isabel Allende, tao anatin'ny maro hafa, no niara-nientana tamin'ireo teny tena ankafiziny.
Azonao atao ny mijery ireo fampidirana ary mifidy ireo tena tianao amin'ny fanarahana ity rohy ity Fidio Ny Teninao. Ny sarin'ireo olo-malaza mandritra ny fiomanan'izy ireo tamin'ny 18 Jiona, ary koa ny fotoana rehetra tamin'ny herintaona dia azo jerena eo amin'ny Pejy Flickr-n'izy ireo.